Mobile/Whatsapp/Wechat/Telegram:+86 18858875050 mailaka: fangyongmachine@gmail.com
milina fanontana Flexo
Milina fanaovana kitapo fako
milina fanaovana fonon-tanana
Machine fanaovana saron-tava
milina fanaovana paosy
Masinina fanaovana fonon-kiraro
milina fanaovana satroka fandroana
Inona no dingana fanodinana ny milina fanaovana kitapo fako?
1. Atombohy ny maotera lehibe, mihazakazaka amin'ny hafainganam-pandeha ambany, ary avy eo dia amboary ny fanaraha-maso ny toeran'ny sisiny mba hanasasaka ny sarimihetsika eo amin'ny toerana afovoany. Ampifanaraho ny rollers nip havia sy havanana mba hampifanaraka ny sarimihetsika havia sy havanana, ary amboary ny rollers nip eo anoloana sy aoriana mba hampifanaraka ny lamina. Ahitsio
Olana maro mahazatra amin'ny milina fanaovana kitapo sy ny fanoherana
Ny milina fanaovana kitapo dia milina iray izay manamboatra fonosana plastika isan-karazany na kitapo famonosana ara-materialy hafa, ary ny isan-karazany fanodinana azy dia habe plastika na harona famonosana fitaovana hafa amin'ny hateviny sy ny fepetra voafaritra. Mazava ho azy, ao anatin'ny dingan'ny fampiasana...
Famokarana background ny milina fanaovana kitapo fako mandeha ho azy
Ny milina fanaovana kitapo dia milina manamboatra harona plastika na harona fonosana hafa. Ny haben'ny fanodinana azy dia ny habe sy ny hatevin'ny harona plastika na fitaovana hafa. Amin'ny ankapobeny, ny harona fonosana plastika dia ny ma ...
Fomba mahazatra ny milina fanaovana kitapo tsy tenona
Ny kitapo tsy voatenona amin'ny ankapobeny dia mampiasa ny dingan'ny fanontam-pirinty, izay matetika antsoina hoe "fanontam-pirinty", izay efa fanao mahazatra ho an'ny mpanamboatra maro. Satria amin'ny ankapobeny dia fanontam-pirinty amin'ny tanana izany, ary ny lokon'ny dingana dia tsy mora fehezina, toy ny mpanjifa ...
Rehefa mampiasa ny milina slitting amin'ny famokarana dia tsy maintsy tandremana ny fizotran'ny slitting ary tsy tokony hohamaivanina.
nataon'ny admin tamin'ny 20-10-15
Rehefa mampiasa ny milina slitting amin'ny famokarana dia tsy maintsy tandremana ny fizotran'ny slitting ary tsy tokony hohamaivanina. Noho izany, ity lahatsoratra ity dia hanambatra ny extruded mitambatra BOPP / LDPE mitambatra sarimihetsika, ny kalitao olana mitranga amin'ny slitting dingana famokarana sy ny mifandray pr ...
Fanaraha-maso ny mari-pana fanapahana hafanana mandritra ny fanamboarana kitapo
Amin'ny dingan'ny fanamboarana kitapo, indraindray ny famehezana kitapo dia tsy dia tsara loatra. Ny vokatra vokarina amin'izany fomba izany dia tsy mahafeno fepetra. Inona no mahatonga izany tranga izany? Tokony handinika ny hafanana cutter hafanana Fanafarana ny hifehy ny mari-pana cutter mandritra ny fanaovana kitapo, raha ny mari-pana dia tsy...
Nahoana no tsy mitovy ny halavan'ny kitapo mandritra ny fanamboarana kitapo?
Ao amin'ny dingan'ny fanamboarana kitapo, indraindray ny halavan'ny harona plastika vita dia tsy mitovy. Ny vokatra vokarina amin'izany fomba izany dia tsy mahafeno fepetra. Inona no mahatonga izany tranga izany? Tokony handinika tsara ny fiasan'ny milina fanaovana kitapo amin'ireto lafiny manaraka ireto isika mba hisorohana ny karazana ...
Down Hengtang River Industrial Area, Yaru Village, Shangwang Street, Ruian City, Zhejiang Province, Sina